ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့နယ်အတွင်း နေချင်စဖွယ်ကောင်းသော condo အသစ်ကလေးရောင်းရန်ရှိသည်။…
Advertiser : smammahar
Asking Price : 3,500 သိန်း
Phone no : 09773221022
ရောင်းရန် - Condo Sale in Yankin (ID-765)
Condo for sale in Bauk Htaw , Yankin Township. Living area - 1596 sqft, organized by Living-room, One Master Bed-room, Two Single Bed-rooms, Dinning, Kitchen and Bath-rooms. Condo with four air-conditioners. Sale Price - 2000 Lakhs (Nego) Condo Sale in Yankin (ID-765) We can do negotiate on that Above…...
Condo for sale in Bauk Htaw , Yankin Township. Living area - 1596 sqft, organized by Living-room, One Master Bed-room, Two Single Bed-rooms, Dinning, Kitchen and Bath-rooms. Condo with four air-conditioners. Sale Price - 2000 Lakhs (Nego) Condo Sale in Yankin (ID-765) We can do negotiate on that Above…
Listed 13 November 2018
Phone no : 09792444317, 09773356137
ရောင်းရန် - CSA-045, အဉ္ဖူလီဖြိုးကွန်ဒိုတွင် အကျယ်(1300sqft) ရှိ အခန်းအမြန်ရောင်းမည်။
လှိုင်မြို့နယ်၊ အဉ္ဖလီဖြိုးကွန်ဒိုတွင် အကျယ်အဝန်း(1300) စတုရန်းပေကျယ်ဝန်းပါသည်။ မာစတာအိပ်ခန်း(၁)ခန်း၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၂)ခန်း၊…...
လှိုင်မြို့နယ်၊ အဉ္ဖလီဖြိုးကွန်ဒိုတွင် အကျယ်အဝန်း(1300) စတုရန်းပေကျယ်ဝန်းပါသည်။ မာစတာအိပ်ခန်း(၁)ခန်း၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၂)ခန်း၊…
Asking Price : 1,840 သိန်း
Phone no : 01-248209,09-421072285,09-795725561
ရောင်းရန် - CSA-044, ရွှေပိတောက်ကွန်ဒိုတွင် အကျယ်(1600sqft) ရှိ ကွန်ဒို အမြန်ငှားမည်။
စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရွှေပိတောက်ကွန်ဒိုတွင် အကျယ်အဝန်း(1600) စတုရန်းပေကျယ်ဝန်းပါသည်။ မာစတာအိပ်ခန်း(၁)ခန်း၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၂)ခန်း၊…...
စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရွှေပိတောက်ကွန်ဒိုတွင် အကျယ်အဝန်း(1600) စတုရန်းပေကျယ်ဝန်းပါသည်။ မာစတာအိပ်ခန်း(၁)ခန်း၊ ရိုးရိုးအိပ်ခန်း(၂)ခန်း၊…
ရောင်းရန် - ကြည့်မြင်တိုင်၊ရုံးကြီးလမ်းကျယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို ရောင်းရန်ရှိသည်။…
ကြည့်မြင်တိုင်၊ ရုံးကြီးလမ်းတွင် (18x50)အကျယ်ရှိ MBR-1, BR-1, A/C-2, Lift, ပရိဘောဂအစုံပါရှိသော အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး မီနီကွန်ဒိုတိုက်ခန်းအား…...
ကြည့်မြင်တိုင်၊ ရုံးကြီးလမ်းတွင် (18x50)အကျယ်ရှိ MBR-1, BR-1, A/C-2, Lift, ပရိဘောဂအစုံပါရှိသော အဆင့်မြင့်ပြင်ဆင်ပြီး မီနီကွန်ဒိုတိုက်ခန်းအား…
Listed 12 November 2018
Phone no : 01-510600, 01-510940, 09-5040160,
ရောင်းရန် - အဉ္ဇလီဖြိုးကွန်ဒိုတွင် (1275 Sqft)အကျယ်ရှိ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်း…
လှိုင်မြို့နယ်၊ အဉ္ဇလီဖြိုးကွန်ဒိုတွင် (1275Sqft)အကျယ်ရှိ သွားလာရလွယ်ကူပြီး နေထိုင်ရန်ကောင်းသော MBR1, BR2, A/C,Lift, ပါကေးခင်း၊…...
လှိုင်မြို့နယ်၊ အဉ္ဇလီဖြိုးကွန်ဒိုတွင် (1275Sqft)အကျယ်ရှိ သွားလာရလွယ်ကူပြီး နေထိုင်ရန်ကောင်းသော MBR1, BR2, A/C,Lift, ပါကေးခင်း၊…
Listed3November 2018
Asking Price : 1,650 သိန်း
ရောင်းရန် - (1250Sqft)အကျယ်ရှိ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းအား ရောင်းမည်။ ဆက်သွယ်ရန်…
လှိုင်မြို့နယ်၊ မာလာမြိုင်လမ်းတွင် (1250Sqft)အကျယ်ရှိ Masterbedroom-1, Singlebedroom-1, A/C-2,Lift, ကားပါကင် ပါရှိသော မီနီကွန်ဒိုတိုက်ခန်းအားေ၇ာင်းရန်ရှိသည်။…...
လှိုင်မြို့နယ်၊ မာလာမြိုင်လမ်းတွင် (1250Sqft)အကျယ်ရှိ Masterbedroom-1, Singlebedroom-1, A/C-2,Lift, ကားပါကင် ပါရှိသော မီနီကွန်ဒိုတိုက်ခန်းအားေ၇ာင်းရန်ရှိသည်။…
ရောင်းရန် - အလုံ နှင်းဆီကုန်းလမ်းရှိ Golden Rose Condo တွင်အဆင့်မြင့် ပြင်ဆင်ထားသော…
- အခန်းအကျယ် (2150)sqft - 2Master bedrooms,2bedrooms -5Aircon - အထပ်မြင့်(ရွှေတိဂုံဘုရား၊ River View) - Car parking - 24 hour security - 24 နာရီ မီး - Lift (4) စီး(ကဒ်စနစ်) - ရေကူးကန်…...
- အခန်းအကျယ် (2150)sqft - 2Master bedrooms,2bedrooms -5Aircon - အထပ်မြင့်(ရွှေတိဂုံဘုရား၊ River View) - Car parking - 24 hour security - 24 နာရီ မီး - Lift (4) စီး(ကဒ်စနစ်) - ရေကူးကန်…
Listed 1 November 2018
ဖုန်းဆက်ရန်09 260 996995
09 260 996995
Advertiser : GSP
Asking Price : 4,000 သိန်း
Phone no : 09 260 996995
ရောင်းရန် - အသင့်နေထိုင်နိုင်သောကွန်ဒိုတိုက်ခန်းရောင်းမည်။ ဆက်သွယ်ရန်…
လှိုင်မြို့နယ်၊ မဟာဆွေလမ်း၊ ဗဟိုလမ်းမနှင့် အင်းစိန်လမ်းမကြားရှိ မဟာဆွေကွန်ဒိုတွင် သွားလာရလွယ်ကူပြီး မိသားစုနေထိုင်ရန်ကောင်းသော…...
လှိုင်မြို့နယ်၊ မဟာဆွေလမ်း၊ ဗဟိုလမ်းမနှင့် အင်းစိန်လမ်းမကြားရှိ မဟာဆွေကွန်ဒိုတွင် သွားလာရလွယ်ကူပြီး မိသားစုနေထိုင်ရန်ကောင်းသော…
Listed 29 October 2018
Asking Price : 1,600 သိန်း
ရောင်းရန် - မိုးစန္ဒာကွန်ဒိုတွင် (1500Sqft)အကျယ်ရှိ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်း…
ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ မိုးစန္ဒာကွန်ဒိုတွင် မိသားစုနေထိုင်ရန်သင့်တော်သော (1500Sqft)အကျယ်ရှိ MBR2,BR1,A/C3, ၅-လွာ ၊ ပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေထိုင်နိုင်သော…...
ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ မိုးစန္ဒာကွန်ဒိုတွင် မိသားစုနေထိုင်ရန်သင့်တော်သော (1500Sqft)အကျယ်ရှိ MBR2,BR1,A/C3, ၅-လွာ ၊ ပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေထိုင်နိုင်သော…
Listed 26 October 2018
မြန်မာပြည်ရှိ ရောင်းရန်ကွန်ဒိုများ ရောင်းရန် Real Estate ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေ များ
မြန်မာပြည်ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ ကချင်ပြည်နယ် ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ
ကရင်ပြည်နယ် ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ ကယားပြည်နယ် ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ မွန်ပြည်နယ် ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ
ရခိုင်ပြည်နယ် ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ ရှမ်းပြည်နယ် ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ
ချင်းပြည်နယ် ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ နေပြည်တော် ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ
မြန်မာပြည်ရှိ ရောင်းရန် property များ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရှိ ရောင်းရန် property များ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ရောင်းရန် property များ ကချင်ပြည်နယ်ရှိ ရောင်းရန် property များ
ကရင်ပြည်နယ်ရှိ ရောင်းရန် property များ ကယားပြည်နယ်ရှိ ရောင်းရန် property များ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ရောင်းရန် property များ မွန်ပြည်နယ်ရှိ ရောင်းရန် property များ
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ရောင်းရန် property များ ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ ရောင်းရန် property များ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရှိ ရောင်းရန် property များ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ရောင်းရန် property များ
ချင်းပြည်နယ်ရှိ ရောင်းရန် property များ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ရောင်းရန် property များ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရှိ ရောင်းရန် property များ နေပြည်တော်ရှိ ရောင်းရန် property များ
မြန်မာပြည်ရှိ ရောင်းရန် တိုက်ခန်းများ မြန်မာပြည်ရှိ ရောင်းရန် မီနီကွန်ဒိုများ
မြန်မာပြည်ရှိ ရောင်းရန် ကွန်ဒိုများ မြန်မာပြည် ရှိ ရောင်းရန် လုံးချင်းအိမ်များ
မြန်မာပြည် ရှိ ရောင်းရန် စက်မှုဇုန် မြန်မာပြည်ရှိ ရောင်းရန် ခြံ၊ မြေကွက်
မြန်မာပြည်ရှိ ရောင်းရန် ၀န်ဆောင်မှု့ပါ တိုက်ခန်း များ မြန်မာပြည်ရှိ ရောင်းရန် ရုံးခန်း/ဆိုင်ခန်းများ